२०७७ असोज १५ बिहीबार ०६:१५:०० प्रकाशित
काठमाडौं- कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन नेपाल ल्याउन औषधि आयातकर्ता कम्पनी ट्रिनिटी फर्मास्युटिकलले गरेको भनिएको समझदारीप्रति सरकारले भने अनविज्ञता प्रकट गरेको छ। ट्रिनिटी फर्मास्युटिकलले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन 'स्पुतनिक-५' २ करोड ५० लाख डोज नेपाल ल्याउनका लागि समझदारी गरेका समाचार सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो।
द रसियन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड (आरडिआइएस)ले विज्ञप्ति निकाल्दै नेपालमा बिक्री गर्नका लागि २ करोड ५० लाख डोज भ्याक्सिन दिने सहमति जनाएको कुरा उल्लेख छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले हालसम्म कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन नेपाल आउने विषयमा जानकारी नभएको बताए। उनले यसरी आफुखुशी भ्याक्सिन ल्याउन नमिल्ने जानकारी दिए। उनले भने, ‘नेपालमा भ्याक्सिन ल्याउनका लागि सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ। यस विषयमा हामीलाई जानकारी छैन। समाचारमा आएको त्यो फर्मा खोज्दैछौं। बाहिर के-के गर्छन् तर त्यस्तो सिस्टमबाट भ्याक्सिन ल्याउन मिल्दैन।’
औषधि व्यवस्था विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीले पनि भ्याक्सिन आउने विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए। सञ्चारमाध्यमबाट खबर सुनेपनि औपचारिक रुपमा कुनै जानकारी नआएको उनको भनाइ छ।
कुनै पनि भ्याक्सिन नेपाल ल्याउन औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। कुनै पनि औषधि या भ्याक्सिन बजारमा जाने हो भने विभागबाट अध्ययन र अनुसन्धान गरी परिषदबाट अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने उनले बताए। तर उनीहरुले स्वीकृति लिएको जानकारी हालसम्म पनि नभएको उनले बताए।
उनका अनुसार नेपालमा खोप आयात गर्दा आयात गर्नेले कुन कम्पनीबाट के कस्तो खोप ल्याउन लागेको हो? उक्त खोप विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट स्वीकृत भए नभएको, गुणस्तर लगायतका सबै कुराको अध्ययन गरेर मात्र विभागले स्वीकृति दिने छ।
ट्रिनिटी फर्मास्युटिकलले ल्याउने भनेको कोरोनाविरुद्धको खोप अझै पनि परीक्षणकै क्रममा रहेका कारण सर्वप्रथम त उक्त खोपलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले मानिसमा प्रयोगका लागि अनुमति दिनु पर्ने हुन्छ। तर परीक्षणकै क्रममा रहेका कारण उक्त खोप मानिसमा के कति प्रभावकारी हुन्छ? परीक्षण सफल हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय भने अझै अन्यौलमा नै छ।
ट्रिनिटी फर्मास्युटिकलका निर्देशक किशोर अधिकारीले हाल कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन ल्याउन रुसी कम्पनीसँग सहमति मात्र भएको बताए।
'स्पुतनिक-५'को परीक्षण सकिएपछि मात्र भ्याक्सिन ल्याउन स्वीकृति लिने प्रक्रियामा जाने उनले बताए। उनका अनुसार हाल गरिएको सहमति भ्याक्सिन बनेपछि नेपालमा ल्याउनका लागि गरिएको पहल मात्र हो।
‘हामीले अहिले सहमति मात्र गरेका हौं। जब यो भ्याक्सिनको ट्रायल पास हुन्छ, त्यसपछि त्यो डकुमेन्ट लिएर हामी नेपालमा भ्याक्सिन ल्याउने प्रक्रियामा जान्छौं। उनीहरुको ट्रायल पास नभइकन र सरकारको स्वीकृति बिना नेपाल ल्याउन पाउँदैन,’ उनले भने।